फोटोशप | मा कलम उपकरण प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | सामान्य, ट्यूटोरियलहरू, कार्टुन भेक्टर
कहिलेकाँही हामीहरू हाम्रो ज्ञानका कारण हाम्रा उपकरणहरूको उपयोग सीमित गर्दछौं। जो मानिसहरुका विषय विज्ञहरु हुन् उनीहरु लाई एक अन्तहीन फोटोशप, इलस्ट्रेटर, इंडिजइन, आदि मार्फत डिजाइन सम्भावनाहरूको। तर कुनै श doubt्का बिना, धेरै जसो हामी सबैलाई हामी एक सय प्रतिशत यी सबै सुविधाहरूको कार्यक्रमले प्रदान गर्ने सबै सम्भावनाहरू जान्दैनौं। कलम उपकरणले धेरैलाई दिनेछ।
जब हामी एक उपकरण वा अर्कोसँग खेल्ने प्रयास गर्छौं, हामी छोडिन्छौं हाम्रो दिमागमा प्रोग्राम गरिएको गोलहरू हाम्रो खाली क्यानभासमा कब्जा गर्न सक्षम छैनन् भनेर हेरेर। र त्यस कारणका लागि, हामी अन्य विकल्पहरू खोज्दछौं, अधिकतर केसहरूमा, हामीले सुरुमा कल्पना गरेको भन्दा कम आकर्षक। त्यसकारण हामी मार्गहरू कसरी प्रयोग गर्ने सिक्ने प्रयास गर्न जानेछौं।
1 पथहरू के हुन्?
2 कलम उपकरणको साथ सिकौं
3 हामी फ्रीफॉर्म पेन उपकरण प्रयोग गर्न लागेका छौं
4 फ्रि-फाराम कलमको रूपमा, तर चुम्बकीय
पथहरू के हुन्?
पथले हामीलाई कर्भ र लाइनहरू कोर्न अनुमति दिन्छ जुन परिमार्जित र भेक्टर वस्तुहरूको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आकृति तहहरू पेन उपकरण र आकार उपकरणहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। Tहामी मार्गहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छौं जुन "पथ" प्यानलमा कार्य पथको रूपमा देखा पर्दछ। अन्तमा हामीसँग रस्टरिज्ड आकारहरू सिर्जना गर्ने संभावना हुनेछ जुन हामी रंग गर्न सक्दछौं।
जब तपाईं एक फोटोशप प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छपृष्ठभूमि हटाउन यो उपकरणको साथ प्रोफाइल कन्टूरि us हामीलाई परिचित छ। एडोब इलस्ट्रेटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि, पेन उपकरण प्रयोग गरेर सहि पथहरू प्रदान गर्न र मूल आकारहरू सिर्जना गर्नका लागि अधिक उपयोगी हुनेछ। Sयो छनौटहरू बनाउन पनि उपयोगी छ, किनकि परिणाम अझ सटीक हुन सक्छ।
जब हामी मार्ग सिर्जना गर्दछौं, हामी तपाईंले प्रत्येक क्लिकको साथ एch्कर पोइन्ट परिभाषित गर्दछौं, साथै दिशा लाइनहरू जसको अन्त्य दिश बिन्दुमा समाप्त हुन्छ यदि यो एक घुमावदार पथ हो भने। दुई एch्कर बिन्दु बीचको अंश खण्ड हो। सीधा वा वक्र मार्ग खुला हुन सक्छ र यसको अन्त्य हुन्छ वा बन्द छ, र यो सर्कल हुन सक्छ।
फोटोशपमा पथ इलस्ट्रेटरमा निर्यात गर्न सकिन्छ।
कलम उपकरणको साथ सिकौं
हामी फोटोशप खोल्छौं, एउटा नयाँ खाली कागजात वा पहिले नै परिभाषित छवि सिर्जना गर्दछौं। हामी कलम उपकरण उपकरण प्यानलमा वा सिधा 'P' क्लिक गरेर चयन गर्दछौं। यद्यपि हामी सबैलाई पहिले नै थाहा छ। उपकरण प्यानलमा हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्: पथ, आकार र पिक्सेल।
ट्र्याकिंग: पेन उपकरणले भेक्टर कार्य मार्ग सिर्जना गर्दछ जुन पथ प्यानलमा सूचीमा देखा पर्दछ। प्रश्नमा कागजात बन्द गर्दा हामीले सिर्जना गरेका पथहरू नगुमाउनको लागि, हामीले यसलाई बचत गर्नुपर्दछ।
फारम: यो उपकरणले आकार आकार सिर्जना गर्दछ। हामी आकारलाई हाम्रो मनपर्दोमा सम्पादन गर्न सक्छौं, यसको प्रत्येक प्रयोगहरूमा। 'तह' प्यानलको थम्बनेलमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। 'ड्रप छाया', 'बेभेल र एम्बोस', आदि जस्ता प्रभावहरू पनि थप्नुहोस्।
पिक्सेल: तपाईले देख्नु भएको छ, यो विकल्प सधैं काम गर्दैन। यदि तपाईंले आकार उपकरणहरूमा इशारा गर्नुभयो भने यो अनलक हुनेछ। यो केवल यी लागि काम गर्दछ। आयत, अण्डाकार, अनुकूलन, आदि। एउटा सम्पादन योग्य तहको सट्टामा पिक्सेल तह सिर्जना गर्नुहोस्।
हामी फ्रीफॉर्म पेन उपकरण प्रयोग गर्न लागेका छौं
यो फ्रि-फारम उपकरणले हामीलाई फ्रिह्यान्ड चित्र कोर्न अनुमति दिनेछ छिटो एch्कर पोइन्टहरू स्वचालित रूपमा राखिन्छन् र हामी पछि पुन: ट्याच गर्न सक्छौं। हामी उपकरण प्यानलबाट 'फ्रिफर्म पेन' उपकरण चयन गर्न जाँदैछौं।
हामीले पहिले नै शुरू गरिसक्यौं, हामी एउटा आकार वा पथ तह सिर्जना गर्न सक्छौं शीर्ष विकल्प पट्टीमा। रेखाचित्रको लागि, साधारण पेन्सिलको रूपमा केवल क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस्, र जब तपाईं चित्र कोर्ने काम समाप्त हुन्छ, बटन छोड्नुहोस्। ठ्याक्कै उस्तै जस्तै यो एक स्वतन्त्र रेखाचित्र थियो।
यदि तपाईंले आकार वा पथ बन्द गर्नु अघि बटन जारी गर्नुभयो भने, फेरि मार्गको एक छेउमा क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस्।
फ्रि-फाराम कलमको रूपमा, तर चुम्बकीय
यो उपकरण ठूलो रूपमा चुम्बकीय लुपको रूपमा प्रयोग गरीन्छ। - जसको बारेमा हामी पछि अर्को लेखमा कुरा गर्नेछौं - सम्भव रूपमा सकेसम्म छवि तत्वको रूपरेखा अनुसरण गर्दा।
उपकरण पहुँच गर्न हामी कलमलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रेस र होल्ड गर्दछौंयसैले शीर्षक। र एकचोटी हामीले यो गरिसकेपछि माथिल्लो विकल्प पट्टीमा हामी 'चुम्बकीय' थिच्दछौं। र तपाइँ देख्नुहुनेछ कसरी सूचक परिवर्तन गर्दछ। यस उपकरणको साथ हामी 'उपकरण' प्रतिमा चयन गर्न सक्दछौं, ०. 0,5. र १० बिच सहिष्णुता समायोजित गर्नुहोस् रूपरेखाको पहिचान क्षेत्र निर्धारित गर्न १ र २10 पिक्सेल बीच मान प्रविष्ट गर्नुहोस्।
हामी कन्टूर पत्ता लगाउनका लागि न्यूनतम कन्ट्रास्ट प्रतिशत परिभाषित गर्न सक्छौं। कम कन्ट्रास्ट छविहरूका लागि उच्च मूल्य प्रयोग गर्दै। Linearity फिल्डमा ० र १०० बीचको मान प्रविष्ट गरेर रूपरेखाको पहिचान निर्दिष्ट गर्नुहोस्। उच्च मान, छिटो पोइन्ट प्लेसमेन्ट दर।
हामी पेन प्रेशरको विकल्प मार्क गर्दछौं, विशेष गरी यदि हामी बाह्य ग्राफिक ट्याब्लेटलाई चौडाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रयोग गर्छौं यदि हामी प्रयोग गर्छौं। यदि हामीसँग यो उपकरण छैन भने, योaबाट गर्न यो अधिक जटिल हुने छैन ट्रयाकप्याड वा साधारण माउस।
तपाईं चुम्बकीय उपकरणको साथ धेरै अधिक आकारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछजस्तै, फ्रि-फण्ड कलमको साथ फ्रीह्यान्ड कोर्ने पीसी वा सीएमडीमा म्याकमा एएलटी क्लिक गरेर प्रेस गर्दै। नोट गर्नुहोस् कि यो विकल्प त्यति उपयोगी छैन, किनकि फ्रीफेर पेनको साथ तपाईं यसलाई सीधा गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो अर्को विकल्प हो। तपाईं एक सिधा खण्ड तान्न सक्नुहुनेछ, यसको एक शीर्षमा ALT वा CMD मा क्लिक गरेर र यो पनि बन्द गर्नुहोस्, सेगमेन्टको अर्को पोइन्टमा क्लिक गरेर।
तपाईको अभ्यासमा पेन उपकरण भित्र यी सबै विकल्पहरू सहित, तपाईं अधिक सुस्पष्टता र तपाईं सिर्जना आकारहरूमा अधिक प्रभावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब, उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको रचनात्मक प्रक्रिया सुरू गर्न सुरू गर्नुहोस्, केवल त्यस तरीकाले तपाईं अभ्यासमा देख्नुहुनेछ जुन हामीले यहाँ वर्णन गरेको सबै थियरीमा प्रयोग हुनेछ। परीक्षण गरीरहेको छ र क्षतिलाई वास्ता नगरिकन त्रुटि।
यी दिशानिर्देशहरूले तपाईंलाई विचारहरू दिन सक्दछ, तर ती तपाईंको लागि काम गर्न सक्दैनन्, ताकि तपाईं तिनीहरू प्रत्येकलाई चिन्नुहुनेछ र आफैलाई सूचित गर्न सक्नुहुनेछ। र सोध्नुहोस् यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने, अन्य सहकर्मीहरूले ती चिन्ताहरू हल गर्न सक्छन्। तपाईं केवल पूर्व-परिभाषित आकारहरू प्रयोग गर्न बसोबास गर्न सक्नुहुनेछ र कलमको जटिलतालाई पट्टि राख्न सक्नुहुन्छ, वा यो सहि पाउनुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » फोटोशपमा पेन उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्